Yusuf Garaad: Madaxweynaha Vs Xildhibaanno
Arrintan oo aad mooddo in in badan oo wax ka tari lahayd ay isku fiirsanayaan, qaar kalena ay ka arkaan fursad ay lacag iyo dano kale oo shakhsi ah uga gaaraan ayaa ah mid horseedi karta khatar aad u weyn. Waxaa imaan karta in Baarlamaanku uu laba u kala qeybsamo oo uu markaa gudan waayo waajibaadkiisa.
Mudanayaasha Baarlamaanka waxaa ila habboon in si kasta oo ay u weyn tahay dhaliisha ay Madaxweynaha iyo Wasiirrada ku dhow dhow ay u qabaan, in ay habboon tahay in ay marka hore uga digaan falalka aan iyaga u cuntamin. Ka hor inta aanay u gudbin isku day xil ka qaadis.
Markaa Madaxweyne waxaa hubaal ah in xildhibaannadani ay ka biyo diiddan yihiin siyaasadaada oo ama qaldan ama aad ku guul darreysatay ama aad quursatay in aad iyaga u fasirto xilligii ay ku habbooneyd, si aad uga baaqsato tan maanta ku haysata.
Posted by Yusuf Garaad at 23:03:00